Zendlala Yesinye - umzimba, elise ukhalo, esehlanganise ingxenye urethra (urethral). Esikhathini wesilisa, it unesibopho ukukhiqiza uketshezi. adenoma kumiswa kuholela kokucindezelwa we urethra, futhi ngenxa yalokho, ukuphazamiseka ukugeleza umchamo esinyeni. Ngokuvamile amadoda ungabonisi izimpawu zesifo ezifana BPH. Izimpawu esigabeni sokuqala singase sibe lubonakale neze, isiguli engazizwa ukwanda indlala wendlala.
Ngokwezibalo, lesi sifo ngokuvamile iningi kwenzeka e amadoda owaphenduka ngonyaka-amahlanu mlando. Ngeshwa, urologists esivumelwaneni mayelana isifo wendlala adenoma. Izimbangela ke uvame ahlobene nezinguquko ezihlobene nokukhula neziyaluyalu hormone. Njengoba bekhula, owesilisa i-hormone zamagama kuyehla, futhi lokhu kuholela ekuphelelweni ukuphazamiseka umsebenzi zocansi, isisindo ngokweqile futhi ukubonakala isimila kungavamile ukuba ingozi.
Imbangela okungaba kungenzeka isifo senhliziyo, yokuphila okungenamsoco, ukucindezeleka futhi imvelo. A ososayensi abaningi bayakholelwa ukuthi ukuthuthukiswa izimila benign ngenxa ukuntula emzimbeni trace element zinc. Isizathu sokuba umbandela we-urethra kuyinto adenoma wendlala. Izimpawu zesifo avele, okokuqala kunakho konke, ukuchama kaningi, ikakhulukazi ebusuku.
Ukuvela le nkinga unika ngokuphazamiseka okukhulu nesineke, ukuze kukhucululwe edingekayo voltage abdominals, inqubo iba eside ngoba umchamo eyabiwe ngayo, siphinde zangena abavilaphayo, kodwa ekugcineni ageleza ngezikhathi. Esikhathini esizayo kukhona bethulula akuphelele kwesinye, okwakuyigama imbangela wendlala adenoma. Izimpawu avele ngaphezu enkanukweni njalo zishobinge kanye nokungakwazi ukubamba umchamo ngesikhathi esifanayo.
Ukubukeka izimpawu zokuqala zesifo iyisiginali zokufinyelela Urologist kompetha usizo. Uma ungaphenduki, ungaqalisa isifo efana wendlala adenoma. Izimpawu kuzohluka ngokuhamba kwesikhathi, nokuthi isimo lesiguli buba bubi nakakhulu. esinyeni Ilokhu egcwele ngokuvamile kuholela yokujama tsi umchamo kanye kumiswa amatshe, ukubonakala izimpawu yokwehluleka kwezinso kubonakala ngesimo ukudakwa (ukoma, nomlomo owomile, ikhanda, njalo njalo. N.)
Kulokhu, isiguli iba ukubuyisa futhi ngokushesha ulahlekelwe isisindo, zikhona izimo lapho iziguli ziba inert, ngisho engasenamahloni. Ngaphezu kwalokho, zokugula okungenzeka potency bavukelwe. Kulesi simo, isiguli kunzima kakhulu ukusiza. Ngezinye izikhathi phakathi isifo nzima acute nokugcinwa urinary. Umfutho lo singasebenza njengesisekelo esiqinile sokufinyelela nesimo esicindezelayo, ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezithile (nezidakamizwa, amaphilisi elele nokunye.), Ukuhlinza, kanye notshwala. Lokhu inkinga idinga ukunakekelwa okuphuthumayo.
Lapho ngezinye izikhathi isifo ezifana ukuthuthukisa izinqubo ezengeziwe ukuvuvukala: cystitis, vesicles, njll, okuyinto kakhulu konakalise izinga lesiguli zokuphila. Phezu ukuthola lezi zimpawu kubalulekile ukusebenzisa ubuciko ngokuba isifo kungenzeka. Namuhla, imithi sinekhono eyanele zokuxilonga (ukuhlaziywa kwamakhemikhali, imisindo ephansi,-X-ray, cystoscopy, njll). ukwelashwa uqokwa esekelwe imiphumela yocwaningo.
izidakamizwa (Prostamol, Gentos, flosin et al.) isetshenziswa ukwelapha lesi sifo, ngaleyo ndlela kuncishiswe ingcindezi ureter. Ngeshwa kakhulu izidakamizwa ayizwakali ekwelapheni izifo ekhiqizwa wendlala adenoma. Izimpawu zesifo, yebo, isikhathi esithile, ungakwazi ukubathulisa, kodwa akukho kunomthelela oqonde ngqo imbangela. Musa ume eceleni ne eminyaka yabo nakho kanye imithi yendabuko, adenoma, ukwelashwa nge izitshalo zokwelapha kugcwele.
Omunye wabo ekwelapheni ithanga owaziwa. Ngaphambi ukudla izikhathi 3 baphuze ingilazi ithanga juice noma akudle ehlutshiwe imbewu ngenyanga. Esimweni nzima ukusebenzisa uhlobo ezahlukene ukuhlinzwa.
Ukwelashwa nokuvikelwa otitis abezindaba ezinganeni nakubantu abadala